March 30, 2017 No Comments English, Somali
Dhawaanahaan waxaa la iskusoo sawirey Aamir Khan Iyo Shah rukh Khan oo la sawiran Madaxa Shirkadda Ama CEO-ga Netflix ee Reed Hastings kaasoo aad ugu faafay baraha bulshadda siyaabo kala duwan. Saddexdaan Nin waxay lu kulmeen Qariga Shah Rukh Khan kaaso ay wada hadal badan kula yeesheen Madaxa Netflix, wararka qaar ayaa sheegaya in Aamir Khan Goobtaas uu ku Saxiixay heshiis ku kacaya Rs 120 crore oo netflix ay kula wareegayso Xuquuqda filimkiisa soo socda ee ‘Thugs Of Hindostan’.
Warbixinaddaan oo ah kuwo lagu kalsoonyahay aya shegaya in Aamir Khan markuu u saxiixay Netflix inay iibsadaan Xuquuqda Satelite-ka ee Filimkiisii Dangal ee Sanadii hore dabayaaqadeedii soo baxay ayaa haddana waxaa la leeyahay wuxuu kasii iibiyay shirkaddan Xuquuqda Digital-ka ee filimkaan ama (Digital Rights) kaasoo ku kacaya lacag dhan Rs 20 crore.
Guud ahaan Waxuu yahay heshiiskani in Netflix ay Iibsatay Xuquuqaha Digital iyo Midda Satellite ee filimka soo socda ee Aamir Khan ‘Thugs Of Hindostan’ isagoo la haraya xuquuqaha shineemooyinka iyo Tan music-gaba walow aan weli si rasmi ah loo.
Hase ahaatee Haddu Heshiiska dhaqan galo waxuu noqonaya midkii abid ugu weynaa ee ay bollywood sameyso ama qof kamida uu sameeyo.
Aamir Khan wuxuu soo saaray bishii December ee sanadkii tagay filimkiisii ‘Dangal’ ee blockbuster-ka noqday haddana wuxuu soo wada filim kale oo ay shirkaddiisu soo saartay ee lagu magacaabo ‘ The Secret Superstar’ kaasoo lagu wado inuu soo baxo Bisha August 4-teeda 2017 waana film aad loo wadda sugayo maadaman Mr. Perfectionist wax walba laga filan karo.
Cajiib! Ma dagaal qabow baa kadhaxeeya Rani Mukerji iyo lamanaha Ajey Devgan iyo Kajol?-Ka Ogow Jawaabta halkan